Herisetra teny Anosipatrana Vehivavy naolana sy novonoina, roalahy maty voadaroka..
Omaly vao maraina be tokony ho tamin’ny 5ora dia nahitana vehivavy iray manodidina ny 40 taona maty nihoson-dra tsy nisy fitafiana intsony ny tapany ambany teny digy Anosipatrana akaikin’ny Sicam Anosizato. Sady efa voaolana no mbola nototana vato koa ny lohany ka mangana tanteraka.
Raha ny tombatomban'ny mpijery teo dia naolana izy ary nesorina ny ainy avy eo. Tsy lavitra teo dia nisy roalahy maty koa mety mpiambina ilay orinasa vao amboarina eo akain’ny Sicam ihany io andro io ihany voavely “bois rond”. Raha ny fahitan’ny manodidina, mety niantso vonjy ilay ramatoa dia saika hanavotra izy roalahy. Somary mangingina io toerana io, fa mpanao biriky no misy eo ampita tsy dia lavitra eo. Efa tonga teny an-toerana ny fokontany Anosipatrana sy ny polisin’i Ilanivato. Vao harivariva iny toerana iny dia tsy azo antoka. Mody miandry taksibe eo Anosizato izy ireo, mody mandeha an-tongotra. Raha sodoka ianao fa misy namana dia sakafony.
Toky R& Rabeso